အရောင်လှပြီး ခံတွင်းတွေ့စေဖို့ ထည့်သုံးကြတဲ့ ငရုတ်သီးမှုန့်ကို - Hello Sayarwon
ဟင်းချက်တဲ့အခါတိုင်း အရောင်လေး လှအောင်၊ အရသာလေး ကောင်းအောင်ဆိုပြီး ငရုတ်သီးမှုန့် လေး ထည့်ထည့်ချက်ကြတယ်ဟုတ်။ အရောင်တင်မှုန့်၊ ငရုတ်သီး အစိမ်းမှုန့် စသဖြင့် အမျိုးမျိုး ခေါ်ကြတယ်လေ။
ဒီငရုတ်သီးမှုန့်လေးက ဟင်းတွေကို အရောင်လှ အရသာတိုးစေတာ မှန်ပေမယ့် သေချာ သိမ်းဆည်းမှု မရှိရင် မှိုတက်တာ၊ အစိုပြန်တာတွေ ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ အရသာတိုးစေမယ့် ငရုတ်သီးမှုန့်လေး​ကြောင့် ရောဂါ မတိုးစေဖို့ ဘယ်လိုများ သိမ်းဆည်းကြမလဲ။
ငရုတ်သီးမှုန့် သိမ်းဆည်းနည်း မှန်ရဲ့လား
ငရုတ်သီးမှုန့်က အခြောက်အခြမ်းပဲ ပျက်စီးမှာ မဟုတ်သလို ပုပ်သိုးဖို့ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ယူဆကောင်း ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငရုတ်သီးမှုန့်က သက်တမ်းရှိသလို ပုပ်သိုး ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။
သေချာ မသိမ်းဆည်းဘူးဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အိမ်မှာ ငရုတ်သီးမှုန့် သိမ်းထားတာကရော နည်းစနစ်မှန်ရဲ့လားဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေး ဖတ်ရင်း အတူတူ ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား…….
ငရုတ်သီးမှုန့်ကို လေလုံအောင် ထားပါ
ငရုတ်သီးမှုန့်ကို အထုပ်နဲ့ ထုပ်ထားရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗူး၊ ပုလင်းတွေနဲ့ ထည့်ထားရင် ဖြစ်ဖြစ် လေလုံအောင်သေချာလေး ထုပ်ပိုးထားပါ။ ဒါမှ အစိုပြန်တာနဲ့ ငရုတ်သီးမှုန့် မှိုပြဿနာကို ကာကွယ်ပြီး ဖြစ်မှာပါ။
ရေစိုနေတဲ့ အရာတွေနဲ့ မနှိုက်ပါနဲ့
ငရုတ်သီးမှုန့် ခတ်တဲ့အခါ ဇွန်းကို ရေမစိုနေစေဖို့ သတိပြုပါ။ ဒီလို ရေစိုတာက အစိုပြန်စေပြီး မှိုတက်နိုင်ပါတယ်။ ဇွန်းကို သီးသန့် ထည့်ထားတာမျိုး လုပ်ပေးတာကလည်း နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါ။
နောက်တစ်ချက် သတိထားရမှာက ငရုတ်သီး ခတ်တဲ့ ဇွန်းကို လက်ရေစိုကြီးနဲ့ မကိုင်မိစေဖို့ပါ။ ရေစိုနေတဲ့ လက်နဲ့ ဇွန်းကို ကိုင်တာကလည်း အစိုပြန်စေနိုင်ပါတယ်။
အလင်း တိုက်ရိုက်မကျတဲ့ နေရာမှာ ထားပါ
ငရုတ်သီးမှုန့်ကို နေရောင်နဲ့ တိုက်ရိုက် မထိနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ ကြောင်အိမ်၊ ဗီဒိုစတာတွေထဲမှာ ထည့်သိမ်းပါ။ ဒါပေမယ့် ငရုတ်သီးမှုန့်က လတ်ဆတ်ရဲ့လား။ စားသုံးဖို့ သင့်တော်ရဲ့လားဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ရင် ပုလင်း အကြည်လေးနဲ့ ထည့်ပါ။
အေးမြခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာမှာ ထားပါ
အေးမြခြောက်သွေ့တဲ့နေရာက အစားအစာတွေရဲ့ အာဟာရတန်ဖိုးကို အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငရုတ်သီးကိုလည်း လေလုံတဲ့ ပုလင်းထဲမှာ ထည့်ပြီး အေးမြခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာမှာ သိမ်းဆည်းပါ။
ငရုတ်သီးမှုန့်ကိုမီးအပူနား ထားတာက အာဟာရတန်ဖိုးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုက်သင့်သလောက် အခြောက်ခံ အမှုန့်လုပ်ထားတဲ့ ငရုတ်သီးမှုန့်ကို မီးဖို အပူနားမှာ ထားတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
ငရုတ်သီးမှုန့်တွေက ခဲနေမယ်၊ အဖြူအဖတ်လေးတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆက်မစားပါနဲ့။ လွှင့်ပစ်လိုက်ဖို့ ပြောပါရစေ။
ကဲ………… အိမ်မှာရော ဒီနည်းအတိုင်း ငရုတ်သီးမှုန့်ကို သိမ်းမိရဲ့လား……….
Does Chili Powder Go Bad? https://www.doesitgobad.com/does-chili-powder-go-bad/ Accessed Date 8 December 2020
The Do’s and Don’ts of Storing Dry Spices https://www.myrecipes.com/how-to/how-to-store-dry-spices Accessed Date 8 December 2020
နို့တိုက်မေမေ ငရုတ်သီးစားရင် ဘာဖြစ်မလဲ....